Akukho ukuphumula kwiSharks njengoba iqhubeka ngempelasonto imidlalo yeCurrie Cup - Impempe
Akukho ukuphumula kwiSharks njengoba iqhubeka ngempelasonto imidlalo yeCurrie Cup
December 22, 2020 Impempe.com
Akukho ukuphumula kwiCell C Sharks njengoba abantu abaningi bezobe bejabulela amaholide kaKhisimuzi kuleli sonto.
Leli qembu laseThekwini eliqeqeshwa uSean Everitt liyaziqeqesha isonto lonke njengoba lilungiselela umdlalo onzima weCarling Currie Cup ngeSonto. ISharks izobhekana neToyota Cheetahs, eToyota Stadium, eBloemfontein.
Ezika-Everitt ziphuma emdlalwemi obunzima lapho zishaywe khona yiXerox Lions ngo 27-12 ngoMgqibelo eGoli. U-Everitt akafuni ukuthi bashaywe ngoba kukhona abadlali abane abebengekho ngesikhathi bebhekene neLions.
“Asizolokhu sicasha ngesithupha ngendlela esidlale ngayo kulo mdlalo ngoba besizilungiselele kahle,” kusho lo mqeqeshi kwi-website yeSharks.
“Abadlali abaqale umdlalo banamava, ngikhuluma ngaweSuper Rugby, ngakho asikho isidingo sokucasha ngesithupha nokubeka izaba. Okumele sikwenze ukuthi kufanele sisebenze kanzima ukuze sibe ngcono,” kusho u-Everitt.
ISharks, DHL Western Province, neCheetahs, basasalele emuva ngomdlalo owodwa kwi-log yeCarling Currie Cup, ngakho kusazoshikisha ufudu.
Komunye umdlalo ngempelasonto kuzotholana phezulu iWestern Province neTafel Lager Griquas eDHL Newlands, eKapa, ngoMgqibelo ngo-4.30 ntambama.
Kusobala ukuthi akukho ukuphumula kuwona womane la maqembu yize abanye bezobe bejabulula uKhisimuzi ngoLwesihlanu.
Umdlalo obekumele ube phakathi kweLions neVodacom Bulls ngoMgqibelo, uhlehliselwe uJanuwari 6 (ngo-7 ebusuku) ngenxa yokutholakala kwabaneCovid 19 kwiBulls
i-Currie Cup, Ibhola lombhoxo
Previous Previous post: Uzophenduka isigansonso uKomphela uma uZwane weSundowns eqhubeka nokubhakuzisa inethi
Next Next post: IPirates iwuqale kahle ngewini umkhankaso wayo kwiCAF Confederation Cup